Umhobe 125 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Ingoma yezinyuko. Abo bakholosa ngoYehova banjengentaba yaseZiyon: Ayishukumi, ihleli ngonaphakade.
IYerusalem ijikelezwe ziintaba; Ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.
Ke bona abathi gu bucala ngeendlela zabo ezimagoso-goso,UYehova makabemkise, kunye nabasebenzi bobutshinga. Malube luxolo kuSirayeli.